KOONFUR AFRIKA:- TIRADA DAD KU DHINTAY HILIB SUMAYSAN IYO WADAMO MAMNUUCAY HILIBKII WARSHADAYSNAA EE AY KA SOO DHOOFSAN JIREEN | Saxil News Network
KOONFUR AFRIKA:- TIRADA DAD KU DHINTAY HILIB SUMAYSAN IYO WADAMO MAMNUUCAY HILIBKII WARSHADAYSNAA EE AY KA SOO DHOOFSAN JIREEN
March 6, 2018 - Written by editor
Dalalka kala ah Namibia, Zambia Iyo Bostwana ayaa hakiyay hilibkii ay kasoo dhoofsan jireen waddanka Koonfur Afrika.
Maalinkii Axadda ayay ahayd markii cudur uu ka dillaacay dalka Koonfur Afrika, kaaso laga helay hilibka la warshadeeyay ee dalkaasi uu soo saaro.
Dawladda Malawi ayaa ka codsatay ganacsatada inay dukaamada iyo goobahooda ganacsi ay ka saraan hilibka laga keeno dalka Koonfur Afrika oo aanay isticmaalin.
Sidaasi si lamid ah ayaa waxaa sameynaya bakhaarada hilibka lagu iibiyo ee dalka Koonfur Afrika.
Cudurkan loo yaqaano Listeria ayaa ah mid laga qaado bakteriyada hilibka waxaanu 180 qof ku dilay dalka Koonfur Afrika sannadkii tagey.
qaramada midoobey ayaa waxaa ay sheegtay inay rumaysantahay in cudurkani uu yahay caabuqa ugu wayn ee dunida oo idil ka dillaacay.
Wasaaradda beeraha ee dalka Mozambique ayaa tidhi “waxa aan weeydiisanaynaa dhammaan mulkiilayaasha iyo shirkadaha in badeecadan ay ka guraan iskafaalooyinka dukaamada sababtuna tahay halista ay caafimaadka u keeni karaan”.
Koonfur Afrika waxa ay ku qaadatay muddo sanad ah in ay ogaato cudurka dilaacay.
Waxaa jiray 948 dhacdo oo uu dad soo ritay cudurkan listeria ee laga qaado hilibka suntan ah sanadkii 2017-kii sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, Qaramada Midoobayna ay ku tilmaamay tiradii ugu badneyd adduunka.
Waxaa la rumeysanyahay in uu asal ahaan ka yimid warshad ku taala magaalada waqooyiga ah ee Polokwane . Agaasimaha shirkadda Tiger Brands oo leh warshada ayaa sheegay in aysan jirin wax xiriir toos ah oo ka dhaxeeya dadka dhinyau ee 180-ka ah iyo badeecada shirkadda.